हामीले कस्तो मासु खान उपयुक्त हुन्छ ? (हेर्नुहोस् भिडियो) - Everest Dainik - News from Nepal
हामीले कस्तो मासु खान उपयुक्त हुन्छ ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
हामीले दैनिकजसो खाने गरेका माछामासु खाँदा धेरै कुराहरुमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । स्वच्छ र ताजा मासु कहाँबाट कस्तो खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ ।
सबैले एकपटक हेर्नैपर्ने यो रोचक भिडियो हेर्नुहोस्-
याे पनि पढ्नुस चुट्किला सुनौं, मजाले हाँसौं (भिडियोसहित)